Lin Lin – Death of Mandalay Mp3 Myanmar Online Mp3 | Myanmar Online Mp3
Home » Rock » Lyin Lyin » Lin Lin – Death of Mandalay Mp3	Lin Lin – Death of Mandalay Mp3	August 12, 2012 by MMp3	27 Comments
Listen to Myanmar alternative rock singer Lin Lin’s Mandalay Myo Thay chon Chin (Death of Mandalay) unplugged Live mp3 မန္တလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း (Live)
Lin Lin – Death of Mandalay
မန္တလေးမြို့ သေဆုံးခြင်း လင်းလင်း
Lin Lin Mp3, Myanmar Rock Music	Latest Albums/Songs	Nor Naw – Sayar Kyi Nae Thu Ei Ta Paeh Myar
27 Responses to "Lin Lin – Death of Mandalay Mp3"	hanlin September 6, 2012 at 1:01 pm	ဒီချင်းကိုဘယ်လို Down ရမလဲ..အရမ်းချင်တယ် ပါတယ်…
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို narkyithu14499@gmail.com ကိုပို့ ပေးပါနော်..
zawlay September 10, 2012 at 5:04 am	ဒီသီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဗျာ၊၊ ကိုလင်းလင်းကိုလည်း လေးစားပါတယ်၊အားလည်းကျပါတယ်။ အတုလည်းယူမိပါတယ်ဗျာ၊၊
ဖိုးဇော်ဟိန်း September 30, 2012 at 4:22 am	အဒီသီချင်းလေးကို jmeaung@ ထဲကိုပို့ပေးပါနော် အရမ်းကြိုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုလင်းလင်း
KoHtut October 2, 2012 at 7:44 am	Great !
သူ့အသားမဖြူ လည်း၊ နှလုံးသားဖြူသည် ၊
ပညာရဲရင့် ပွဲလယ်တင့်၏ ။
Atte Lay October 21, 2012 at 12:24 pm	VeRy GoOd အရမ်းကောင်းတဲ့ သီချင်းလေး ပါ ဗျာ
ကြိုက်မှ ကြိုက် တီချင်း ဂို ……. 😛
ပက်ပက် စက်စက် ဒေါင်းသွားတယ်နော် ………….ွေိွေိ
ဟိန်းပိုင် November 7, 2012 at 9:49 am	သီချင်းနားထောင်ရတာမျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်ဗျာ..တကယ်ပါ
kaung set min November 8, 2012 at 7:08 pm	ဒါ..တို့မန်းလေးသားကြီးကွ..။
kaung set min November 8, 2012 at 7:10 pm	ကိုလင်းရေ…
ကျနော်တို့ မန်းလေးတစ်မြို့လုံးက ပရိသတ်တွေ ကိုလင်းကို အားပေးနေမယ်ဆိုတာ
hel lay November 23, 2012 at 2:15 am	ကိုလင်း ကျွန်တော်ကိုဒီသီချင်းပို့ပေးပါလား shadowhlay ကိုပေါ့ဗျာ။ ကိုလင်းအသံကိုအရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ။ညို့အားကောင်းတယ်နော်။ကိုလင်းကိုအစဉ်အားပေးနေတဲ့ဟဲလေးပါ။အဆိုတော်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုလင်း
lily December 20, 2012 at 6:39 am	do any one know when this album released ???
ပြည့်တိုးမောင် January 10, 2013 at 2:14 pm	ကောင်းတယ်ဗျာ
ပြည့်တိုးမောင် January 10, 2013 at 2:19 pm	ko linlin good tal music
alwanshinn January 12, 2013 at 6:48 am	လူဟုခေါ်သည်ဆိုတဲ့သီချင်းလေး တင်ပေးပါလား ဗျာ….အဲ့သီချင်းကျွန်တော်လိုက်ရှာနေတာမတွေ့ ဘူးဗျ….သီချင်းစာသားတွေတော့တွေ့ တယ်ဗျ…..စာသားတွေက တအားကောင်းတယ်ဗျ…….အဲ့သီချင်းကို ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပေးပါလားဗျာ……ကိုလင်းလင်းရဲ့ထာဝရပရိတ်သတ်..
ကိုလင်းလင်း မျိုးကြိးကိုရေးပေးတဲ့ နိုင်ငံရေးသိချင်းတင်ပေးပါလား……….။
ဒါမှမဟုတ် chithumglay17@gmail.com ကိုပို့ ပေးပါလား…..။
Aung Ye Maw February 3, 2013 at 1:32 pm	ဒီ သီချင်းကိုကြားကတည်းက မန္တလေးရဲ့ အနေအထားကို မြင်ယောင်စေပါတယ်… ကိုလင်းလင်းရဲ့ အရေးအသားတွေကို အားကျတယ်ဗျာ…
yan paing July 25, 2013 at 4:10 pm	ကိုလင်း ဂစ်တာတီးပီး သီချင်းဆိုတာ အရမ်းမိုက်တယ် ကျွန်တော်က ကိုလင်း ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ပါ အားကျတယ် လေးလဲလေးစားတယ်ဗျာ
chit moe March 18, 2014 at 7:27 am	Very good Very like
htet myat February 22, 2014 at 3:46 am	I like this song .. thanks
Top Albums	Myo Gyi - Min Shi Tae Myo Mp3 Free Download	ဝေလ – မိတ်ကပ်မကြိုက်သောသီချင်းများ Album	ဝေလ - 1982 Album	Ah Nge: Zit Myit ဇစ်မြစ် Mp3 Album	Lay Phyu and Htoo Eain Thin Duet Songs	Myo Gyi - Change Album	Myo Gyi New Song: Min Shi Tae Myo	Myanmar Music	Myanmar Music